Kiobà: niteny ny mpamaham-bolongana ny mpiasan’ny governemanta hanafoana ny fihaonany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2008 11:48 GMT
Ahiana hofoanan'ny fitondrana mahefa any Kiobà ny fihaonan'ny mpamaham-bolongana kasaina hatao ny 6 desambra. Efa nandritra ny volana vitsivitsy izay no nokarakarana ny fihaonana ary 25 no efa nilaza ny hahatongavany amin'io fotoana io. Saingy heverina ho “manohitra ny revolisiona” (contre-révolutionnnaire) ity fihaonana ity. Izany vaovao izany moa dia notsoahina avy tamin'ny dinika nifanaovan'ny mpiasan'ny minisiteran'ny atitany sy ilay mpamaham-bolongana malaza indrindra ao amin'ny nosy sady nandrombaka ny amboaran'ny bolongana tsara indrindra Yoaní Sánchez ao amin'ny Generación Y [es].
Nahazo taratasy fampitandremana i Sánchez, izay nalainy sary ary naoakany tao amin'ny bolongany, fa tsy maintsy manatona ny paositry ny polisy izy. Tamin'ny alarobia lasa teo moa no notontosaina ny fihaonana tamin'ny solontenan'ny fitondrana, ary dia navoakany avy hatrany ny antsipirian'ny fihaonana avy eo.
Fohy ny fihaonana, fa mahery ny teny. Telo izahay no tao amin'ny birao, ka ny iray izay manana feona mpihira no nilaza ny tenany ho ny Agent (Atoa) Roque. Eo anilako kosa ilay tanora kokoa no manara-maso ary niteny fa Camilo no anarany. Niteny izy ireo fa miaraka amin'ny minisiteran'ny atitany. Tsy vonona ny hihaino izy ireo. Efa misy (soratanana) fandraisana an-tsoratra eo amin'ny birao ary tsy misy na inona na inona hanala voly azy ireo. Tenamanampahaizana amin'ny fanaovana tsindry tokoa ry zareo.
Araka ny efa nahiako ny anton'ny fiantsoana: efa mihamanatona ny fotoana hihaonan'ny mpamaham-bolongana efa nokarakaraintsika, sady tsy nafenina no tsy nanaovana fampielezankevitra, nandritra ny enimbolana izay ary dradrain-dry zareo fa tsy maintsy foanana. Atsasak'adiny taty aoriana , rehefa lavitry ny (polisy) fanamiana sy ny sarin'ny mpitaritolona teo amin'ny rindrina izahay, dia niezaka ny nitadidy izay efa voalaza izahay.
“Manome sosokevitra anao izahay fa nihoatra ny fetran'ny azo leferina ianareo amin'ny fahateren'ny sainareo hifandray amin'ny olon'ny fanoherana ny revolisiona. Mamotika tanteraka anao amin'izay fifampidinihana amin'ny fitondrana Kiobàna izany.
Tsy tokony hisy ny fihaonana kasaina atao afaka andro vitsy foana.
Izahay koa, aty amin'ny lafiny misy anay, dia handray ny fepetra rehetra ilaina ary handray an-tanana ny fandaniana rehetra. Tsy hahazo alalana mihitsy ity fihaonana ity amin'izao diavin'ny firenena , mbola manarina ny vokatry ny rivodoza roa nandalo farany teo izao.”
(dika ho amin'ny teny anglisy nataon'ny Babalú blog)
Tsy i Sánchez ihany no nahazo ny taratasy fampitandremana avy amin'ny mpiasan'ny governemanta (tahaka ny sarotra koa ny manonona azy hoe mpiasam-panjakana!) . Notsidihan'ny polisy tampoka ihany koa i Claudia Cadelo avy amin'ny Octavo Cerco [es] . Nanoratra ny fahagagany izy tao amin'ny lohatsoratra mitondra ny lohateny hoe “izaho koa!,” ary dia navoakany koa ny sarin'ny taratasy fampitandremana:
Raha mbola teo ampiresahana tamin'i Reinaldo Escobar ( vadin'i Yoaní Sánchez’) aho, ka mbola tsy niserasera hahalala izay nitranga, mbola tsy nahalaza akory alaheloko tamin'ny nanafoanana ny fihaonan'ny mpamaham-bolongana voalohany, no indro nandodona teo amin'ny varavarana ny polisy iray ary niteny hoe :
mankany amin'ny biraon'ny polisy any Zapata ianao amin'ny roa folakandro.
Namoaka ny sariny mitazona ny taratasy fiantsoana, mitsiky, manao mariky (V) ny fandriampahalemana ary ao aoriany dia misy soratra maneso hoe “I Love Minint” (Tiako ny minisiteran'ny atitany) i Cadelo. Nisarika ny mason'i Enrisco del Risco ny sary izay mahita azy ho mariky ny “fiovan'ny fotoana” ary manoratra hoe [es]:
Mitondra fanalana tsikelikely ny tahotra (any amin'ny hafa) ny tsiky sy ny fahasahiana mijoro nataony . Fanamby sy fiarahana. Mahalaza ny zavatra rehetra atao amin'ny fihomehezana ny marika hita taorianany sy ny mifanohitra aminy izay natokana ho amin'ny fotoana tsy matotra loatra. Miova ny vanim-potoana satria fantany fa tsy irery izy, ary ny hita amin'izao fotoana ijerena ny sary izao – amin'alahelo kely ihany – dia isika rehetra.
Na dia eo aza izany fampitandreman'ny olon'ny governemanta izany, dia niteny i Sánchez fa mbola hotontosaina araka izay noheverina ny fihaonana. Tao amin'ny vaovaon'ny AFP vao haingana [es] no nanoratan'i Sánchez fa vao maika hahaliana ny olona hamaky ny bolongany ka hahamaro ny mamaky azy izao paikan'ny governemanta izao. Eritreretiny rahateo fa tafahoatra ny fampitandremana satria tsy misy loko politika ny fihaonana, ary ny ivorian'ny mpamaham-bolongana dia miompana amin'ny fifampizarana traikefa sy fahaiza-manao ihany.